Mai Chibwe VekwaZimuto: Munhu anofenda pakurhojana. la petite mort,
Kufenda pakurhojana ( Passing out/ fainting during orgasm condition known as la petite mort, "the little death,") chinhu chinokwanisa kuvhundusa mese. Ndoda kumbotaura nezvazvo kuti vanozvita vasatya kunakigwa pakuvatana. Pane bhuku rinhi
Sex Disasters and How to Survive Them.
Bhuku iri rinonyatsotsanangura kuti nyaya yacho inofamba sei asii chikuru ndechokuti kana zvichikudya moy enda unoonekwa nadhokotera. achakutesita BP yako uye kuti moyo wako unoshanda zvakanaka here. Kana akakuudza kuti hapana chakaipa usavhunduka. Enda unonaigwa nomurume/mukadzi wako.
Zvnti paya mukatanga kukoirana muchichemererana muchinakigwa henyu nechiito chenyu. panosvika nguva yokuti umwe anotanga kusvika panguva yakaoma mukunakigwa kwake. inguva yokuti kana uri mukadzi unotanga kuhwa kubitirigwa zvokuti kufema zvakanaka kunokunetsa. nyika yose yotanga kutenderera zvinoita vhiri remota. Zigumwe zveshoka zvoita sokuti zviri kudonzwa. Muno muchiuno umu unongohwa sokuti watobva umwewo munhu asiri iwe. Padaro murume akaramba achikoira ndipo paunosvika pokuti kana daii waifa ipapo waingoona kuti kufa chinhu chakanaka. Nguva iyi inokwanisa kutora kanguva kanoita 10-20 seconds zvichibva nokuti murume wako akurongera ipi yacho musi iwoyo. Nguva iyoyi inonzi ORGASM/CLIMAX pachirungu. KuchiKaranga handizivi vara racho.
Varumewo zvinoitika paanotanga kubudisa urumehuchienda mumukadzi. Zvinoda munhurume akutsanangurire kuti anohwa sei pazvinoitika, as kana une murume wako mukati, paanotanga kuzviiti unohwa muviri wake kuoma mutezo, kukoira kwake kochinja zvokuti anoda kupinza chombo chese obva awedzera kubatirira, okoira zvine ganyabvu mukati. Kana akakubatirira chiuno anobva ati ndii zvokuti chero wange uri pakati pechikapa unshayya kwekuenda wobva wapiwa urume hwese hwaanahwo. Unohwazve kuti kufema kwake kwaita sokuti abva kure achidzinganiswa neshumba kana imwe mhuka inotyisa.
Bvuna murume wako akuudze kuti anohwa sei panguva iyi.
Panguva iyoyi,mukadzi/murume anokwanisa kufenda zvokusatoziiva kut aripi. koita kuda maminitsi maviri kana matatu, akati ziiii, wozoona otanga kubwaira wbva waziva kuti mupenyu. Vazhinji vedu tinokwanisa kuzviita kamwe chete kana kaviri muupenyu hwese. Vamwe havatombozviiti zvachose. asi vanongonakigwa zvakangofanana. Saka mubvunz ndewekuti kufenda kunoitiswa nei panyaya iyi.
Chinhu chinokwanisa kuvhundusa mese zvokuti kune vaya vanongoti cheroimbwa ikahukura vomhanya kun'anga, unotoona vofunga kuti vaisigwa mushonga. Haisi nyaya yomushonga. Inyaya yokunakigwa chete. Pano toda kumboiongorora tione kuti maitikire ayo ari papi uye zvinokwanisa kusvikepi.
Tese tinoziva kuti kana ukavhunduswa, nokwanisa kufenda. Zvinhu zvinovhundusa zvakawanda, kunoti kushaika kwehama, kuona chinhu chinotisa senyoka kana shumba kana Accident yebhazi, Kutendekegwa pfuti, kudzoka uchiwana imba yapaziwa. Pozotizve zvimwe zvinitika mukati memuviri zvinoti kunakigwa kwakapfuuridza, kugwadziwa, kuita zhara yakawandisa, kubatwa chibharo. Ndakambohwa nyaya yokuti umwe murume aigarorova vanhu muraini akasungwa ndokuenda kujeri. Mujeri akasvikobatwa nevarume vaviri ndokuchinjanwa akafenda akazomuka arhojewa nevakawanda. paakabuda mujeri aingoti ukamutuka ototanga kuchhema.
Saka kana paya wawana munhu anoziva maitire ezvinhu, unokwanisa kunaakigwa zvokusvika pakuffenda. Kwahi maitikire azvo ndekuti BLOOD PRESSURE inokwira. HEART RATE yokwirawo zvokuti paunoita CLIMAX, zvese zvinokasirisa kudzikira zvokuti BRAIN inosara isina OXYGEN yakakwana wobva wafenda. Pane zvinogarotonga mafambire ezvinhu zviviri izvi mumuviri. Kune vakawanda vanokwanisa kungonakigwa pasina kufenda asi kune vashoma vanofenda nokuda kwezvinhu izvi. Vanhu vakadai vanokwanisazve kufendaa kana zvimwe zvezvandataura izvo zvaitika. Zvinoitika kuvarume nokuvakadzi.
Chokuita kana umwe wako afenda.
Umwe wako akafenda, ukaziva kuti ange ari panguva ykunakigwa, iwe chimbomurega akadaro. Kana munhu akafenda parhoji seizvi, anokasira kumuka. Vashoma vanoita maminitsi maviri. Vakawanda havasviki miniti imwe chete. Usatya nazvo nkuti hazvina dambudziko. Zvinongoreva kuti munu ane hana nhete anokasira kufenda. (HEART and BP REGULATOR IIS TOO SENSITIVE) Usatya nazvo. Kana mava kuitazve usatya kunakira umwe wako kana kunakigwa naye.
Kana ukaona zvaita maminitsi maviri kanaa kupfuura, vanzarika umwe wako nomusana, wokasira kuona kuti ari kufema. Kana ukaona kuti kufema kwake hakuna simba, muvatisee nedivi wogonyesa mabvi sezvakaita mwana ari mudumbu. Wadaro, kana akarutsa kasira kuti aendeswe kuchipatara.
Zvinokwanisika kuti musi wekutanga kufenda saka pamwe iye anenge atovhundukawo nazvo. Ukataridza kutya iye anobva atowedzerawo kutya. Usasiya munhu afenda ari ega.
Vanhu vashomanana vanogarofenda pakurhojana. Ingohwsisa ipapo chete.
Vakambozviita uye vanozviita kakawanda, imbofanotiudzawo tihwe. Musataura nhemma veduwee tinoda kudzidza
UDZAI VAMWE !!!!
Kufa pakuiswa/sa, munhu anofa nokuti aiswa/sa
Posted by Mai E Chibwe at 07:05
Ini ndoda kubvunza sepaya pataiva ku high school. Kune vaya vakamboita tusikana. Waiti ukabata musikana makamira, aigona kudonha, zvekuti unotozogamha munhu kuti asakuvara. Saka is that the same condition kana kuti inyaya yekuti by that tym vasikana vanenge vachitanga kunzwa sexual feeling for their first tym??
Unenge wamubata pai musikana uye sei? Kana uchiti aidonha uri kuti aifenda herre kana kuti ungodonha kwekuda kuchinja attention yaari kupiwa? Ndiri kubvunza nokuti handna experience yekudonha kunobva pakubatwa.
Iyi nyaya okufenda pakurjojana inoitika kwese vakadzi nevarume uye initika muupenyu kwete musi wekutanga chete. Asi izvi zvawatarura pamwe zvinoitika kuvanhu vanozoti vakura vofenda pakurhojewa.
Mukadzi wangu ini anogarofenda nguva zhinji kureva kuti ndoClimax yacho yaanenge asvika hre ndinotombotya
19 April 2014 at 05:26
Mubvunze kuti chii chinomuitisa kufenda kwacho uye kuti pane chimwezve here chinomufendesa. Kana kusina ingosiya achidaro. Kana pane chimwe, ngaaende anoongorogwa nevarapi.
Zvinobva nokutizve ane makore mangani uye ane utano hwakadii. Variko vanofenda nguva zhinji pavanovata nevarume vavo. Koitazve vamwe vasingambonakigwi zvachose nekuvata nevarume vavo.